Travel Loan – IMF
Travel Loans (ခရီးသွားချေးငွေ)
အပန်းဖြေခရီးထွက်လိုကြသော လူကြီးမင်းများနှင့် မိသားစုအလိုက် (သို့) မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် အတူစုအဖွဲ့လိုက်(သို့)ကုမ္ပဏီအဖွဲ့လိုက်အပန်းဖြေခရီးသွားမည့်သူများကိုအဆင်ပြေစွာသွားလာနားနေ နိုင်ရန် IM Finance Co.Ltd., မှခရီးသွားကုမ္ပဏီများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ခရီးစဉ်များကိုရောင်းချပေးမည့်ဝန်ဆောင် မှုပေးပါမည်။
ခရီးသွားမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ခရီးသွားကုမ္ပဏီနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး မိမိဝယ်ယူလိုသောခရီးစဉ်များကိုရွေးချယ်၍ IM Finance Co.Ltd., သို့လာရောက်ဆက်သွယ်ရပါမည်။
ခရီးသွားချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် IM Finance Co.Ltd., မှသတ်မှတ်ထားသော ပုံစံတွင်အချက်အလက် ပြည့်စုံစွာရေးသားဖြည့်သွင်းရပါမည်။
လျှောက်ထားသူနှင့် အာမခံမည့်သူ(၂) ဦးတို့သည် ချေးငွေစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသော နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ မူရင်း၊ သန်းကောင်စာရင်းမိတ္တူမူရင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာမူရင်းတို့ကိုတင်ပြရပါမည်။
လျှောက်ထားသူသည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကသက်ဆိုင်ရာရုံးအဖွဲ့အစည်းမှဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာ လစဉ်ဝင်ငွေအတွက်အလုပ်ခန့်စာကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အထောက်အထား(လုပ်ငန်းလိုင်စင်) တို့နှင့်အတူမိမိတို့၏ လစဉ် ၀င်ငွေကိုဖော်ပြပေးရမည်။
ချေးငွေခွင့်ပြုပါက ကနဦးပေးသွင်းငွေ(ခရီးစဉ်တန်ဖိုး၏) ၃၀%ကို IM Finance Co.Ltd.,သို့ပေးသွင်းရပါမည်။ လက်ကျန်ငွေ၇၀%ကိုတစ်လလျှင်အတိုးနှုန်း(၁.၆)%၏လစဉ်အတိုးနှင့်အရင်းကိုလစဉ်လဆန်း(၁)ရက်နေ့မှ(၅)ရက်နေ့အထိပေးသွင်းရပါမည်။ ချေးငွေကာလ မှာ (၆)လမှ (၁၂)လ အထိဖြစ်ပါသည်။
IM Finance is offering the Travel Loans for family trips, friendship tours and company picnic tours at their own choices by linking with very good services Travels & Tours Companies.
The applicant must cooperate with their chosen Travels & Tours Company and keep contact with IM Finance on time.
The travel loan applicant must fill the form of IM Finance completely.
The applicant needs two guarantors for this application.
If applicant is company staff, must attach the staff recommendation letter, income recommendation and Job appointed letter from his/her organization.
For the Own Business Applicant, IM Finance requires Business Reference, Business License and monthly incomes as well.
After the Travel Loan is approved by IM Finance, the applicant must firstly deposit 30% of travel loan amount and the rest of 70% would be deposited with monthly interest 1.6% as repayment. The repayment period is 1st-5th of every month. The loan period are6months and 12 months. This is depend on applicant’s choice.